Maxaa Xisbiyadii Qaranka Ka Dhigey Qaar Qof Iyo Qabiil Uun Ku Tiirsan ? | Hayaan News
Maxaa Xisbiyadii Qaranka Ka Dhigey Qaar Qof Iyo Qabiil Uun Ku Tiirsan ?
March 20, 2019 - Written by admin
W/Q Maxamuud Daahir Cumar
Xisbiyada siyaasada inta badan waxaa sameeya koox dad ah oo iskugu yimid inay ku guuleystaan talada dalka islamarkaana ay helaan awood siyaasi ah si ay isteerinka ugu qabtaan dawlada una jaangooyaan siyaasada qaranka.
Xisbyada siyaasadu inta badan waa qaar kala mabda duwan oo aan kala eegan qorshayaasha siyaasadeed. Waxaa jira shaqooyin badan oo ay tahay in xisbi qaran uu qabto islamarkaana ay tahay inay u qorsheynaato sida inuu kursiga qaranka u sareeya gaadho si taasi ugu suurta gashan waa inay u shaqeeyaan dadkii mustqbalka xafiisyada dawlada maamuli lahaa oo aanu koox wax ma tarayaal ah soo urursanin. Xisbiyada siyaasada waa inay dad badan ku qancin karaan inay si mutawacnimo ah ugu shaqeeyaan waqtiga doorashada si taageerayaashooda loogu dhiiri galiyo inay doorashada u soo baxaan. Musharaxiinta ay dadka hor keenayaan waa inay yihiin qaar ku adag mabda xisbigooda, ummadana si wacan ugu adeegi kara. Marka xisbi siyaasadeed guuleysto waxaa haboon in xafiisyada dawlada loo dhiibo dad daacad ah oo qaranka u adeega islamarkaana marka hore lagu soo carbiyey xisbiga dhaxdiisa.
Nidaamka xisbiyada siyaasiga ah waxaa aan ka soo waaridnay wadamada reer Yurub iyo Maraykanka iyagaana sameystay waxaanay yihiin noocyo badan oo aad u kala aragti duwan hanaanka dhaqaalaha loo maamulayo sida: Communism, Socialist, Democratic socialism, Social Democracy, Centre left liberalism, Centrism, Centre right conservatism, Conservatism dhamaan xisbiyadan siyaasadeed way kala mabda duwanyihiin laakiin midkasta waxaa cad tubta uu doonayo inuu wadanka ku hogaamiyo.
Innaga dalkeenan yar oo Somaliland hadaan u soo noqdo nidaamka axsaabta badan ama sameynta xisbi siyaasadeed waxaan ku jirnaa imika muddo ku dhow labaatan sano waxaanad moodaa inaan ka baydhnay tubtii ay ahayd inay u shaqeeyaan dhamaan xisbiyada siyaasada ee heer qaran. Dhamaan noocyada xisbiyada ee aduunyada ka jira ma jiro xisbi xisbi kale barnaamijkiisa soo qortaa oo lashiryimaada ama qaar la isku khaldaa ma jiro xisbiyo reero ay go’aan ka gaadhaan talidiisa.
Nidaamkeena xisbiyadu waa mid aan odhan karo meel uu aduunyada ka jiraa ma jiro waa nidaam xisbi + qabiil oo aan la kala saari Karin ma jiro seddexda xisbi ee dalka manta ka jira wax mabda ah oo ay ku kala duwanyihiin sida axsaabta aduunyada oo qaarkood ay aaminsayihiin in danyarta cashuurta laga dhimo qaarna ay aaminsanyihiin in ganacsatada cashuurta laga dhimo waa labo mabda oo cad. Dhinaca kala xeerarka xisbiyada dhexdooda lama tixgaliyo hadey tahay hanaanka doorashada xisbiga dhexdiisa iyo hadey tahay in xubinta magaca xisbi ku timaada golayaasha qaranku aanay xisbi kale u wareegin.
Hadaba su ‘aasha meesha taala waxaa weeyi maxaa xisbiyadan aan heer qaran ku sheegayno inta badan ku tiiriyey qof ama qabiil. Aduunyada aynu ka soo eeganay hanaanka xisbyada way innaga duwanyihiin marka hore xisbiyadu waxay ku aasaasanyihiin mabda cad cida taageertaana waxay ku taageeraan mabda cad arinta dhaqaalaha waxay leeyihiin hanaan ay dhaqaalaha u urursadaan oo cad waxaa xoogan in xubnaha xisbiga si joogta ah looga qaado lacag ay xisbiga ku bixiyaan waxaa hufan hanaankooda maaliyadeed oo waa xisbiyo isku filan kolka ay ololaha galayaan oo qabiil uma dawaro sida xisbiyadeedna. Taasi waxay keentay inay noqdaan xisbiyo la wada leeyahay oo aan qofna lahayn qabiilna sheegan Karin ileyn waxaa lagu maalgaliyey lacag isku mid ah oo laga qaadey xubnaha.
Hadaan u soo daadagno xisbiyada qaranka Somaliland ee tubtii xisbi nimo ka leexdey islamarkaana noqdey xisbiyo lagu maalgaliyo hab qabiil, lagu maamulo hab qabiil, lagu taageero hab qabiil. Su’ aal muhiim ah ayaan jeclahay inaan isweydiinoo maxaa xisbiyada qaranka ee Somaliland ka dhigey qaar uu qof leeyahay ama reer leeyahay ?
Su’aasha jawaabteedu ma adka marka xisbigii qaranku aanu lahayn hanaan maaliyadeed oo hufan islamarkaana aan xubnaha golaha dhexe iyo fulintu aanay bixin lacagtii qaadhaanka xisbiga ee ku waajibey xaguu xisbigu ka keenaya kharashkii howlihiisa uu ku qabsan lahaa waqtiga ololaha. Bal u fiirso gudoomiyaha xisbiga ayaa laga doonayaa dhamaan dhaqaalihii xisbigu ku socon lahaa waqtiga ololaha kolkaas ayaa isna reerkooda kula cararayaa keena lacag aan xisbiga ku wadno sidaas ayaa xisbigii lacag loogu soo ururinayaa mar haddii cidii maalgashatay ay tahay gudoomiyaha xisbiga iyo reerkooda hadey dadka ka sheegtaan maxaan ula yaabaynaa???????
Hadii aan rabno xisbi qaran oo loo simanyahay maamulkiisa waa in waxaa galiya ee dhaqaalaha dhamaan xisbiga xubnihiisu bixiyaan oo aan gudoomiyaha waxkasta laga doonin si hadhow loo odhan karo kursiga bane kuma haboonide haddiise sidan imika ay tahay ay sii ahaato xisbi kasta ninkaa lacagta galiyey ayaa maalinba ninkii uu doono ka eryi doona waligiina hor fadhi doona islamarkaana waxaa uu noqon doonaa xisbi reer sida imika seddexda xisbi reero u yihiin.
Anigu shakhsiyan waxaan talo ku jeedin lahaa in dhaqaalaha laga qaado xubnaha golaha dhexe iyo fulinta si fiican loo ururiyo lacag waxogey ahna laga dhigo tusaale ahaa $50 golaha dhexe bilkasta $80 gudida fulinta bilkasta bal hadda eeg $50 * 330 Xubnood $16,500 bishiiba sanadkiina lacag dhan $198,000 waa dhaqaale fiican oo xisbigu ku socon karo iyadoo inta yare ee dawladu siisana qaadanaya kolkaa xisbigu dhaqaale fiican ayuu heli lahaa gudoomiyaha culeyska ayaa ka yaraan lahaa xisbiyada waxaa gali lahaa dad ladan oo aan mabda’ooda la iibsan Karin waxay ka bixi lahaayeen in reer sheegto ama xisbigii ku tirsanaado waxaa suurtagal noqon lahayd in xeerka lagu dhaqmo iyo maamulka sare si hawlyar loo badalo haddii hogaamintooda la saluugo. Waxaanan filayaa sababta ugu weyn ee xisbiyada ka dhigtay mid qof leeyahay ama qabiil sheegto inay tahay dhaqaalaha xisbiga oo gudoomiyihii lagu dul kufay isna xaga reerkooda ula cararay.
Falanqeeya arimaha Bulshada iyo siyaasada